I-Hub Bearing Factory - Abakhiqizi baseChina Abahlinzeki, abahlinzeki
Ukuthwala isondo kuyinto ethize ekhethekile esetshenziselwa amasondo ezimoto, athwala isisindo sayo yonke imoto, amandla okusheshisa, amandla okuqinisa, ukuguqula amandla e-lateral, nokudlidliza nomthelela obangelwa izimo zomgwaqo. Ukuze kuqinisekiswe ukuphepha nokuthembeka ngesikhathi sokubopha amabhuleki, ama-anti-lock braking system (ABS) nawo aya ngokuya ethandwa kakhulu. Ngakho-ke, imakethe inesidingo esikhulayo samayunithi wokuthwala ihabhu lamasondo anezinzwa ezakhelwe ngaphakathi. Amabhere wamasondo angahlukaniswa abe yizinhlobo zesizukulwane sokuqala, sesibili nesesithathu ngokwentuthuko yawo.
Amabombo wehabhu lamasondo izingxenye ezibalulekile zokuhamba zezimoto. I-axle axle ibhekene nokunciphisa ukumelana okungqubuzanayo lapho i-chassis isebenza futhi igcina ukushayela okujwayelekile kwemoto. Uma ukuthwala kwehabhu kwehluleka, kungadala umsindo, ukufudumeza ukushisa, njll., Ikakhulukazi isondo langaphambili lisobala kakhulu, futhi kulula ukudala izehlakalo eziyingozi njengokungalawuleki. Ngakho-ke, ama-hub bearings kufanele agcinwe ngesikhathi esifanele.